शेयर बजार :- दोहोरो अङ्कले घट्यो ! - Sabal Post
शेयर बजार :- दोहोरो अङ्कले घट्यो !
काठमाडौँ, १३ मङ्सिर । धितोपत्र बजारमा आज शेयरको मूल्यमा दोहोरो अङ्कको गिरावट भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक १० दशमलव ३७ बिन्दुले घटेर एक हजार १४८ दशमलव ७० बिन्दुमा झरेको छ । यस्तै ‘क’ वर्गका कम्पनीको शेयर कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक २ दशमलव २१ बिन्दुले घटेर २४४ दशमलव २३ बिन्दुमा पुगेको छ ।
पाखापानीमा बासुकी नाग देवताको मन्दिर स्थापना